Vaovao - Tsenan'ny fampisarahana ny rivotra: antenaina hahatratra ny fitomboan'ny vola miditra amin'ny taona 2020 sy hatramin'ny 2026
"Ny tatitra an'ny Intellect dia manome ny tatitra farany momba ny famakafakana sy ny vinavinan'ny tsenan'ny fampisarahana ny rivotra hatramin'ny 2020 ka hatramin'ny 2026. Manome hevi-dehibe ny tatitra ary manome tombony ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny tatitra amin'ny antsipirihany. Ho fanampin'izany, mifantoka amin'ny mpilalao lehibe ao amin'ny ny indostrian'ny fampisarahana ny rivotra hamaritana sy hamakafaka ny habetsahan'ny varotra, ny lanja, ny fizarana tsena, ny tontolon'ny fifaninanana amin'ny tsena ary ny fivoarana farany.
Ny tsenan'ny fampisarahana ny rivotra dia hitombo manomboka amin'ny XXX amin'ny taona 2019 ka hatramin'ny XXX amin'ny 2026, miaraka amin'ny taha mitombo isan-taona ny fisondrotana isan-taona. Ny taona ifotoran'ny fandinihana dia ny 2019, ary ny haben'ny tsena dia manomboka amin'ny 2020 ka hatramin'ny 2026.
Voalohany indrindra, ny tatitra dia manome topy maso topimaso ny indostria, ao anatin'izany ny famaritana, ny fanasokajiana, ny fampiharana ary ny vahaolana amin'ny rojom-indostrialy. Ny famakafakana ny indostrian'ny fampisarahana ny rivotra dia natokana ho an'ny tsena manerantany, ao anatin'izany ny tantaram-pandrosoana, ny fizarana fizarana, ny fampandrosoana isam-paritra lehibe ary ny fanombanana ireo mpifaninana.
Faharoa, diniho ny politika sy ny drafitra fitomboana, ary koa ny fizotran'ny fanamboarana sy ny firafitry ny vidiny. Ny tatitra ihany koa dia miresaka momba ny angona momba ny famatsiana sy ny fangatahana, ny angon-drakitra manafatra sy manondrana, ny vidiny, ny vidiny, ny vola miditra, ary ny vola marobe any amin'ny faritra lehibe (toa an'i Etazonia, Eropa, Sina, ary Japon) ary ireo faritra lehibe hafa. Ho fanampin'izany, ny tsenan'ny fitaovana fampisarahana ny rivotra dia hanolotra ny famakafakana ny fironana amin'ny tsena, ny anton-javatra mitondra fiara ary ny fanamby mifototra amin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny lalam-barotra isan-karazany.
Ny virus coronavirus (COVID-19) dia miely manerantany, misy fiatraikany lehibe amin'ny toekarena sy ny tsena manerantany. Ny tatitra dia mihevitra sy manazava ny fiantraikan'ny COVID-19 eo amin'ny tsenan'ny fampisarahana ny rivotra amin'ny sehatry ny tsena, ny faritra, ny firenena ary ny mpilalao lehibe. Amerika avaratra sy eropa no firenena iharan'ny virus coronavirus, ary mpilalao lehibe amin'ny toekarena manerantany izy ireo. Ny tatitra dia mamakafaka amin'ny antsipiriany ny fiantraikan'ny tsena eo amin'ny tsenan'ny fampisarahana ny rivotra, ny paikadim-pitomboana, ny fikorontanan'ny famatsiana ao Shina, ary ny lamina fanjifana.
Ny mpanamboatra ambony eo amin'ny tsenan'ny fampisarahana ny rivotra manerantany dia: Linde JSC Cryogenic Metal Air Liquid Air Products Taiyo Nippon Sanso Praxair HNEC Hangyang Group Messer Sichuan Air Separation AMCS Air Water Gas Engineering LLC
Miaraka amin'ny fihenan'ny fitomboan'ny harinkarena eran-tany, ny indostrian'ny fitaovana fampisarahana ny rivotra dia nisy fiatraikany ihany koa, saingy nitazona ny fitomboana be fanantenana nandritra ny efa-taona lasa. Ny tsenan'ny fampisarahana ny rivotra manerantany dia nitazona salanisa fitomboana isan-taona XX.X%, nanomboka tamin'ny XX USD tamin'ny 2018 ka hatramin'ny XX USD tamin'ny 2026. Mino ny manam-pahaizana momba anay fa mandritra ny taona vitsivitsy dia hitombo hatrany ny tsenan'ny fampisarahana ny rivotra amin'ny 2026.
Ny tatitra Intellect dia manome fomba fijery mazava momba ireo faritra samihafa, toy ny fizarana fizarana, mpandinika isam-paritra, portfolio-n'ny vokatra, arahin'ireo fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny mpitarika tsena sy ny paikadin-dry zareo M&A.
Raha jerena ara-jeografika, ity tatitra ity dia mandalina ireo mpamokatra sy mpanjifa ambony indrindra, mifantoka amin'ny fahaizan'ny vokatra, famoahana, sanda, fanjifana, fizarana tsena ary fahafaha-mitombo amin'ireo faritra manan-danja ireo, mandrakotra
Report Intellect no vahaolana tokana misy anao amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fikarohana eny an-tsena sy ny faharanitan-tsena. Fantatsika ny maha-zava-dehibe ny faharanitan-tsena sy ny filany eo amin'ny tontolon'ny fifaninanana ankehitriny. Ny ekipanay matihanina dia hiasa mafy hahazoana ny tatitra fikarohana marina indrindra, miaraka amina angona tsy azo alaina, hahazoana antoka fa afaka mitondra valiny tena tsara ho anao izahay isaky ny mandeha. Noho izany, ho faly ny ekipanay hanome anao fanampiana tsara indrindra, na ny tatitra farany nataon'ny mpikaroka na ny fangatahana namboarina.